Dr. Tint Swe – Page6– Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ Belching လေတက်တာကို Burping, Ru-ctus, Eructation စသဖြင့်ခေါ်တယ်။ အစာလမ်းကြောင်းထဲက လေတွေအထက်တက်ပြီး ပါးစပ်ကနေ ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ အများအားဖြင့် အစာမျိုပြွန်နဲ့ အစာအိမ်ထဲက လေတွေတက်-ထွက်လာတာပါ။ လေတက်ရင်း အသံပါထွက်တယ်။ တခါတလေ အနံ့အသက်လဲပါမယ်။ လူတိုင်း အဲလိုဖြစ်ကြပေမဲ့ လူ့ရှေ့သူ့ရှေ့...
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ခေါင်းမူးပြီးအန်တာ (Giddiness and nausea)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ Q.ကျွန်မက အိပ်ရေးပျက်တာများရင် အစာလွန်တာများရင် ခေါင်းတွေမူးပြီး အန်တတ်ပါတယ်။ ဆရာ့ဆောင်းပါးက အချက်တွေက ကျွန်မဖြစ်နေတာတွေနဲ့ တော်တော်ဆင်တူပါတယ်ဆရာ။ အရင်က အဖြစ်ကျဲပေမဲ့ အခု ခဏခဏလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သောက်ရမဲ့ဆေးကို ညွှန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာ။ A. ရောဂါအခြေအနေ အကုန်အစင်မသိရဘဲ ဆေးနည်းပေးရတာ...
ကျွန်မဖြစ်နေတာ ခေါင်းအရမ်းကိုက်ခြင်းပါ (Tension headache)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျွန်မနာမည် (—) ပါ။ အသက်က ၃၀ ပြည့်ပါပြီ။ (့) တက္ကသိုလ်က ဆရာမတစ်ယောက်ပါရှင့်။ အခုကျွန်မဖြစ်နေတာ ခေါင်းအရမ်းကိုက်ခြင်းပါ။ နားရွက်အကြောတွေလည်း ကိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရင် ညာဘက်မျက်လုံးထဲက အကြောတွေပါ လိုက်ကိုက်နေပါတယ်။ မျက်ခုံးရိုးလည်း တင်းနေပါတယ်ရှင့်။ ဇက်ကြောလည်း...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျွန်မချစ်သူခြေထောက်မှာ ငါးမျက်စိအဖုလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဆေးစားလို့ရလား။ သူကတော့ ခွဲရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲဆိုတာရယ်။ ဘယ်လိုသတိပြု နေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါရှင့်။ ဟုတ်တယ်။ “ငါးမျက်စိ” လိုမျိုး လူတော်တော်များများ ဖြစ်ကြတယ်။ မနေ့ကတောင် ဆရာ့ဆေးခန်းလာပြတာ ၂...
နှာခေါင်းကင်ဆာ (Nasal cancers)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဆရာရှင့် . . သမီးအဒေါ်က နှာခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လည်ပင်းမှာလည်း အကျိတ်တွေ ထွက်လာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခု ဓာတ်ကင်နေရတာလို့ ပြောပါတယ်။ သမီးသိချင်တာက နှာခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ရေးပေးပါလားရှင့်။ သမီးသိချင်လို့ပါ၊...
ကျီးကန်းပါးစပ်နာ (Angular stomatitis)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ Q. ကျွန်တော့်မှာ မကြာခဏ (၂)လတကြိမ်နီးပါး အရပ်ခေါ် ကျီးပါးစပ်နာ ပေါက်တတ်ပါတယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်းနဲ့ လျှာဖျားမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အဲသလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်၊ ဘာဆေးသောက်ရမယ်ဆိုတာ – ကျီးကန်းပါးစပ်နာကို Angular stomatitis (Cheilosis or Angular cheilitis)...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ Q. ဆရာရှင့် သားလေးက အသက် ၆ နှစ်ပါ။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ခံစားနေရပါတယ်။ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးပျောက်အောင် ကုသချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးဖြစ်ဖြစ် အကြံပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ နှစ်စဉ်မေလရဲ့ ပဌမအင်္ဂါနေ့ကို ကမ္ဘာ့ပန်းနာရောဂါနေ့လို့ သတ်မှတ်တာမို့ ဒီစာက ရာသီစာဖြစ်သွားရော။ မေးတဲ့လူကို...